Global Voices teny Malagasy » Kenya: #NairobiBlast Tenifototra Nalaza Tao Amin’ny Twitter Nandritra ny Fipoahana Tao Nairobi · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Mey 2012 8:14 GMT 1	 · Mpanoratra Ndesanjo Macha Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Mainty, Kenyà, Mediam-bahoaka, Vaovao Mafana
Fipoahana  mahery vaika no nitranga tao amin'ny arabe lehibe iray tao Nairobi, Làlana Moi, ao an-drenivohitra Kenya tamin'ny Alatsinainy atoandro. Nilaza ny fanadihadiana teny amboalohany fa noho ny olana teo amin'ny herinaratra no nahatonga ny loza. Nolavin'ny lehiben'ny polisy ny tsaho milaza fa fampihorohoroana fanapoahana baomba avy amin'ny Al-Shabaab ny loza.
Nahitana fipoahana baomba sy grenady nisesisesy tao Kenya  hatramin'izay nitsofohan'ny miaramila tao amin'ny firenena Somalia hanafihana ny Al Shabaab izay, hetsika antsoina hoe “Operation Linda Nchi” (amin'ny teny Swahili “Hetsika ho Fiarovana ny Firenena”).
Tao amin'ny Twitter, nampiasa ny tenifototra #NairobiBlast  sy #MoiAvenueBlast  ny mpiserasera hiresahana momba ny loza niseho sy hizarana vaovao ihany koa.
@__RamzZy__ : Raha tsy mpamoaka vaovao ianao, ary tsy misy antony tokony hijanonao ao, mandehana misintaka lavidavitra. Avelao ny polisy & mpamonjy voina hanao ny asany. #MoiAvenueBlast
@cobbo3 : Zava-doza ho an'ny olona ny mitangorona ao Moi & Kimathi St taorian'ny fipoahana #MoiAvenueBlast. Raha mbola manapoaka baomba eo ny mpampihorohoro, matetika ny baomba faharoa mipoaka eny akaikin'ny vahoaka.
@jaydab : @mckenziecnn, miandry izay holazain'ny vaovao izahay momba izao #nairobiblast (fipoahana tao Nairobi) izao. Tatero araka ny tokony izy ny vaovao ary aza manitatra.
@CyrusNjoroge : Raha vao tonga tao an-toerana ny fifampitam-baovaon'olo-tsotra, nanjary “manam-pahaizana” avokoa isika rehetra. Tsy miandry zavatra ela isika. #Nairobiblast
@saddiqueshaban : Mino tanteraka aho fa mijery akaiky ny fihetsiky ny mpitati-baovao sy ny fomba fitaterana ny #nairobiblast ny @MediaCouncilK . Tsy maintsy raisina ny andraikitra
@Kevin2Tek : Malaza manerantany ankehitriny ny #NairobiBlast. Azafady, hamarino tsara ilay sioka alefanao, aza manaparitaka tahotra na lainga!
@iAMneshynsky : tokony tsy ho maikamaika hanatsoaka hevitra ny olona ary hilaza fa fanafihana avy amin'ny al shabaab izany..mety ho toy ny zavatra rehetra ihany izany amin'izao fotoana izao #NairobiBlast
@careywinnie : Tompo o, inoako fa tsy maninona avy ireo namako sy ny hafa rehetra nijery horonantsary tao!! Inona no mitranga #NairobiBlast #moiavenue?
@jowac50 : RT #NairobiBlast nilaza ny lehiben'ny polisy fa noho ny olana teo amin'ny herinaratra no nahatonga ny fipoahana – Tatitra
@Fionaakumu : Mila dinihana indray ny teny hoe “fipoahana” sy “firefotra” . satria mitovy ny dikan'izy roa tonta? #MoiAvenueBlast
@tonybkaranja : Mila drafitra matipaika hamahana ny krizy isika fa tsy drafitra amin'ny taratasy ihany #nairobiblast
@MisterAlbie : Mampanenina mafy antsika ny tsy fahampian'ny fanomanana sy ny tsy fieritreretana. #Firehydrants etc #MoiAvenueBlast
@TeamKonshens1 : Hita miharihary ny tsy fahaiza-manao ny ekipa mpamonjy voina eto amintsika!! Toy ny sarimihetsika amin'ny fahitalavitra! #NairobiBlast
@iCabway : #MoiAvenueBlast mampatsiahy antsika ny antony TSY MAINTSY nametrahana ny paompy mpamatsy rano ho an'ny mpamonjy voina amin'izao fotoana mikorontana izao. Tsy mampisy fanantenana ny tanàna Afrikanina amin'ity taranja ity.
@iAMneshynsky : Nanararaotra naka izay hitany ireo mpandroba nandritra ny fipoahana #NairobiBlast tao amin'ny lalana Moi.
@rmunene : “Nitsimpona” kiraro sy akanjo tamin'ny toeram-pivarotana nitrangan'ny fipoahana ny Kenyana. #nairobiBlast #KTNLiveStream
@ArybaStacks : Tsy azoko ny antony mahatonga ny polisy mamela ny olona hijanona eo akaikin'ny lalàna Moi Av…. Ka raha misy fipoahana fanindroany indray? #MoiAvenueBlast
@Mwanikih : Vao maika hasarotin'ny polisy ny zava-mitranga amin'ny fanerena ny olona handao ny toerana. Mihiaka ireo olona ankehitriny hoe “Mlikua wapi?” [Aiza ianareo?] #NairobiBlast
Nilaza ny polisy Kenyana  fa olona 27 no naratra nandritra ny fipoahana ary efa tsaboina eny amin'ny hopitaly izy ireo
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/05/31/33685/
 fipoahana baomba sy grenady nisesisesy tao Kenya: https://globalvoicesonline.org/2011/10/25/kenya-online-reactions-to-grenade-attacks-from-al-shabaab/
 @CyrusNjoroge: https://mg.globalvoices.org https://twitter.com/CyrusNjoroge/status/207072728145084417
 @saddiqueshaban: https://mg.globalvoices.org https://twitter.com/saddiqueshaban/status/207072826010775552
 @iAMneshynsky: https://mg.globalvoices.org https://twitter.com/iAMneshynsky/status/207059302886801408
 @careywinnie: https://mg.globalvoices.org https://twitter.com/careywinnie/status/207058384992747521
 @Fionaakumu: https://mg.globalvoices.org https://twitter.com/Fionaakumu/status/207065082562215937
 @tonybkaranja: https://mg.globalvoices.org https://twitter.com/tonybkaranja/status/207065408220573696
 @TeamKonshens1: https://mg.globalvoices.org https://twitter.com/TeamKonshens1/status/207065159947141123
 @iAMneshynsky: https://mg.globalvoices.org https://twitter.com/iAMneshynsky/status/207058510125604864
 Nilaza ny polisy Kenyana: http://www.standardmedia.co.ke/index.php?articleID=2000058933&story_title=Dozens%20injured%20in%20Nairobi%20blast